Akụkụ microscope: njirimara na ọrụ | Netwọk Mgbasa Ozi
The mikroskopu bụ pụtara mfe iji ngwá na gba ọtọ anya, ma na nza nke nkọwa nke ga-eme ka a dị iche. A na-ahụ akụkụ niile na ihe ndị metụtara itinye aka n’ìhè na imepụta ihe oyiyi dị elu na sistemụ igwe eji enyo enyo. Enwere ọtụtụ akụkụ nke microscope ekwesịrị ịkọwa ya iji ghọta ọrụ ahụ nke ọma.
Ya mere, n'isiokwu a anyị ga-egosi gị ihe bụ akụkụ nke microscope na njirimara ya bụ isi.
1 Akụkụ nke microscope: usoro nyocha
2 Ofdị ebumnuche
3 Akụkụ otu microscope: ihe mkpuchi anya
4 Isi mmalite ọkụ na condenser
Akụkụ nke microscope: usoro nyocha
Sistemụ ngwa anya bụ akụkụ kachasị mkpa nke microscope. Anyị anaghị ekwu maka usoro ọkụ, nke ọzọ bụ sistemụ nyocha. Edebere ha ka ha nwee ike ịmata ọdịiche dị n'etiti ihe ndị na-ahụ maka ịgbagha ma ọ bụ ịgwọ ọkụ na ihe ndị na-enyere aka inye nkwado nhazi n'etiti akụkụ niile nke ngwa ahụ. Akụkụ ndị a niile bụ ihe nke usoro sistemụ. Ihe abuo abuo nke mejuputara anya nke microscope bu ebumnobi na anya anya. Usoro ọkụ niile gụnyere ụfọdụ akụkụ dịka ha bụ ndị na-elekwasị anya, diaphragm, condenser na optical prisms.
Ọ bụrụ na microscope nwere igwefoto dijitalụ, a na-ewerekwa ya dị ka akụkụ nke sistemu anya. Ka anyị lee ihe bụ akụkụ nke a microscope nzọụkwụ site nzọụkwụ. Nke mbụ bụ ebumnobi. Ọ bụ usoro nzuzu bụ na ọ dị n'akụkụ ihe nlele ahụ ma ọ bụ nke na-enye onyonyo ahụ dị elu. Ihe mkpuchi nke oghere nwere uru ọ bara mgbe niile ma ọ bụ ihe mmekọrịta dị n'etiti nha oyuyo ahụ na etu ihe ahụ gwara anyị. Iji maa atụ: ka anyị chee na anyị nwere microscope atọrọ na 40x. Nke a pụtara na Ihe onyonyo a anyị ga-ahụ ji okpukpu iri anọ karịa nke ihe ahụ ihe nlele ahụ dị.
A maara ọdịdị ahụ buru ibu dị ka ezigbo oyiyi. Otutu microscopes nwere ebumnuche di iche iche iji mezuo ogo di iche iche. Buru n'uche na a ghaghi imeghari microscopes na otutu ụdị ihe omuma di iche iche. A ga-enwe nnukwu ihe atụ na ndị pere mpe. Ihe ndị a na - eme ka ọ dị mkpa iji dozie ebumnobi.
Ihe ọzọ na-akọwa ebumnuche nke microscope bụ oghere ọnụ ọgụgụ. Ntọala a dị oke mkpa ebe ọ bụ na ọ na-akọwa mkpebi ahụ. Ọ bụrụhaala na anyị nwere ezigbo mkpebi, anyị nwere ike ịhụ ihe nlele ahụ nke ọma.
Ka anyị nyochaa ihe bụ iche iche nke ebumnuche nwere ike dị na a mikroskopu:
Ebumnuche achromatic: Ọ bụ nke kachasị mfe ma jiri ya mezie aberration na-acha akwụkwọ ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na chromatic aberration na-acha anụnụ anụnụ na ọbara ọbara.
Ebumnuche Apochromatic: ọ bụ ụdị ntanetị kachasị elu ma na-enyere aka idozi aberration chromatic na agba anọ. O nwekwara ike inyere aka imezi aberration atọ na agba atọ.
Akọrọ iche: Ha bụ ndị ruru ogo dị elu ma na-ejikwa ya ebe ọ bụ na ha dị mfe iji. Naanị na a na-eji ha na ụlọ nyocha nke omume nke agbụrụ mahadum.
Ebumnuche nke ulo oru mbo a haziri ha ka ha nwee ike nweta mmụba na mkpebi dị elu n'ọtụtụ buru ibu. Ha nwere oghere onu ogugu di elu mana achoro uzo ozo ka etinye ya n'etiti ihe nlele na anya m.
Akụkụ otu microscope: ihe mkpuchi anya
Onyinye anya bu udiri anya nke anyi ji hu anya nlele. N'ebe a, anyị nwere ike ịhụ ọkwa nke abụọ nke oyiyi ahụ. Ebumnuche na-ewepụta ọtụtụ mmụba na nkuku bụ nke na-enye ntakịrị ịdịkarị ntakịrị nke nwere ike ịdị n'etiti 5x na 10x a. Ka anyị ghara ichefu na lens na-emepụta 20x, 40x, 100x magnification. Anyi ekwesighi ichefu nke ahu, ka elu di elu, ka o siri ike karisie ike.
Sistemụ anya anya nke anụ ahụ bụ ọrụ maka ịkwalite onyonyo ahụ ma dozie ụfọdụ mmeghe anya anya ruo n'ókè ụfọdụ. Ndị a ma ama nwere diaphragm nke na-eje ozi iji belata ntụgharị uche nke ọkụ na-apụta na lens. E nwere ụdị ntutu dị iche iche ole na ole. Ihe eji eme ihe bu ihe nlere anya di nma na ndi na-ewu ewu. Ihe ndị dị na ya bụ ndị ọkụ na-ebu ụzọ gafee diaphragm wee rute anya m. Anya nku anya na-adịghị mma bụ nke diaphragm dị n’etiti anya m abụọ.
Isi mmalite ọkụ na condenser
Ha bụ akụkụ abụọ nke microscope na-adọrọ mmasị. Isi ọkụ bụ ihe dị mkpa microscope ga-enwerịrị. Ọ dị oké mkpa ka ọ nwee ike ịpụta ìhè dị mkpa na nwere ike ịmịpụta ihe nlele anyị. Dabere na ọkụ ọkụ nke dị na microscope, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị n'etiti microscopes na-ebufe ma na-egosipụta microscopes. Nke mbu bu ndi nwere enweghi oku n’okpuru uzo. Sekọnd bụ ndị na-amụnye ihe nlele site na ihu elu ya.
Mikroskopu na-arụ ọrụ mgbe niile site na oriọna na-acha ọkụ ọkụ nke etinyere na nhazi ahụ. Otú ọ dị, ọ dịworị mma na nkà na ụzụ ọhụrụ dịka ọ nwere ụfọdụ ọghọm. Nke mbụ bụ ike oriri nke bulbs ndị a. Nke abụọ bụ oke okpomọkụ ha wepụrụ, nke mere ka o sie ike idobe ihe nlele ndị ahụ na ọnọdụ ha. Ka anyị ghara ichefu na A ghaghị ime ule iji nlele na ọnọdụ dị mma n'oge niile.
Banyere condenser, ọ bụ otu n'ime akụkụ nke microscope nke a na-ewu site na nchikota anya m na nke na-eduzi ụzarị ọkụ nke ọkụ ọkụ na-ebute site na ìhè ahụ gaa na nlele ahụ. Ọ dị n'etiti etiti na ọkụ ọkụ. Ihe kachasị dị mma bụ na ụzarị ọkụ na-agbaso ụzọ dị iche iche. Maka nke a, condenser na-aghọ ihe dị mkpa iji nwee ike inwe nnukwu mmetụta na ogo onyonyo anyị ga-enweta.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere akụkụ nke microscope na ihe bụ isi njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Akụkụ microscope
Elu ala mbara igwe